IManor Cottage (UK11037)
UCottages,Com unezimvo eziyi-947 zezinye iindawo.
Emva kosuku oluxakekileyo oluchithwe uhlola iPaki yeSizwe yaseDartmoor, buyela eManor Cottage kwaye uphumle phambi kwesitshisi seenkuni esipholileyo. Umgangatho ophantsi:
Igumbi lokuhlala / lokutyela: Ngesitshisi sokhuni, i-40 "I-Freeview Smart TV, isidlali seDVD, umgangatho weplanga kunye neengcango zaseFransi ezikhokelela kwipatio.
Ikhitshi: Ne-oveni yombane, isitovu sokungeniswa, imicrowave, ifriji/ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, iwasha/isomisi kunye nomgangatho wamaplanga.
Igumbi lokulala 1: Nebhedi ephindwe kabini, iFreeview Smart TV kunye ne-en-suite ene-cubicle yeshawa kunye nendlu yangasese.
Ukufika: Igalari enesofa eyodwa.
Igumbi lokulala 2: Nge-zip kunye nekhonkco yeebhedi ezingamawele (inokuba yinkosi enkulu xa uceliwe), iFreeview Smart TV kunye nemiqadi.
Igumbi lokuhlambela: Ngebhafu, i-attachment yeshawari, indlu yangasese kunye ne-heater yetawuli kaloliwe.. Indlu yebarbecue. Indawo yokupaka yabucala yeemoto ezi-2 .. Zombini iipropati: Ukufudumeza okuphakathi kombane, umbane, ilinen yebhedi, iitawuli, i-Wi-Fi kunye nezigodo zokutshisa iinkuni zibandakanyiwe. Ibhedi, ibhedi yohambo, isitulo esikhulu kunye nezinyuko ziyafumaneka xa uceliwe. Wamkelekile ipakethe. Croquet iyafumaneka ngesicelo. Ipatio enefenitshala yegadi kunye nebarbecue. Isitiya esikhulu esinelati enefenitshala yegadi (ekwabelwana ngayo nezinye iipropathi ezikwisiza). Idama lokuqubha elishushu langaphandle (ekwabelwana ngalo, vula iHlobo lika-2020). I-1 inja yamkelekile, igcinwe ikhokela ngamaxesha onke (ilizwe lezimvu). Akutshaywa. Nceda uqaphele: Kukho idama elibiyelweyo emabaleni. Ngomdla wokhuseleko lwakho, ichibi lokuqubha aliyi kufumaneka ngoJulayi nango-Agasti. ilali Bow. Zombini ezi cottages zixhotyiswe kumgangatho olungileyo kakhulu kwaye nganye ineempawu zayo ezizodwa kunye nomtsalane. Izitshisi zokhuni, iikhikhini ezixhotyiswe kakuhle kunye neendawo zepatio zangasese zonke zinegalelo ekubheneleni kwee-cottages. Zombini iGrattan Cottage, evalelweyo, kunye neManor Cottage, iphiko lepropathi, zijonge igadi yeziqhamo endala, indawo enkulu enengca eneminye imithi yeziqhamo eseleyo. Kukulungele ukuhlala ngaphandle kwimini eshushu yasehlotyeni okanye ukuthatha inja yolula ekuseni. Ngaphakathi kwigadi yeziqhamo, indlwana nganye inendawo yokuhlala yabucala; I-Grattan Cottage ine-gazebo ephakamileyo ngelixa i-Manor Cottage isebenzisa indlu ye-barbecue yangasese. I-Croquet ifumaneka ngokulungiselela kwangaphambili kunye nomnini.
Ilali yaseBow ikumgama omfutshane kwaye ine-pub kunye nevenkile egcinwe kakuhle yendawo. Ngenxa yendawo esembindini, iindlwana zenza isiseko esifanelekileyo sokuphonononga amaphandle angqonge iDevon. Idolophu yengingqi yaseOkehampton ikufutshane kwaye ithathwa njengesango eliya eDartmoor National Park. Idolophu ikwabonelela ngoluhlu oluhle lweevenkile kunye nezinto eziluncedo.
E-Dartmoor kukho ukuhamba okuninzi kuyo yonke iminyaka kunye nobuchule bokukonwabela le ndawo imangalisayo nemangalisayo, kunye neelali ezintle ezine-pubs kunye namagumbi eti. Ngaselunxwemeni kukho iilwandle ezininzi ezintle kunye neendawo zokuhlala ezibandakanya iSaunton, iWoolacombe kunye neWestward Ho! Uhambo oluya kwiSiqithi saseLundy lunokulungiswa ukusuka kwipier yaseBideford. Kukho iindawo ezininzi zomdla ezikufutshane ngokubandakanya i-R.H.S. iigadi eRosemoor, eDartington Crystal kunye nelali yokuloba eyimbali yaseClovelly. Ndwendwela inqaba yokugqibela eza kwakhiwa eNgilani eCastle Drogo (National Trust). Kukho igalufa e-Okehampton, e-Ashbury kunye neCrediton ekufutshane, okanye ungaqesha ibhayisekile kwaye ujikeleze iTarka Trail eGreat Torrington. Thenga iimayile ezi-1¼, i-pub kunye nendawo yokutyela ¾ yemayile.
I-Grattan Cottage (ref UK11036) kunye neManor Cottage (ref UK11037) zinokubhukishwa kunye ukuhlalisa ukuya kwiindwendwe ezili-9.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bow, near Crediton